Ndị secessionist degara Britain akwụkwọ: Kee Naịjirịa iji chekwaa ndụ anyị
Politics Nwere ike 20, 2021
Otu jikọrọ ndị otu Naịjirịa nke akpọrọ Nigerian Indigenous Nationalities Alliance for Self-Determination (NINAS) agwala onye isi ụlọ ọrụ Britain dị na Naịjirịa ka o kwe ka mpaghara mpaghara mee mkpebi, dịka ụfọdụ si kwuo.
Ekwuru nke a n'akwụkwọ ozi Tony Nnadi, ode akwụkwọ ukwu nke Lower Niger Congress na ngalaba-onye na-akpọkọta nke NINAS (Njikọ nke agbụrụ agbụrụ nke South na Middle Belt).
Nnadi katọrọ kọmishọna ukwu nke Britain na Naịjirịa, Catriona Laing, maka ikwu na onye ọ bụla tinyere aka na ọsọ na nkwadobe ntuliaka 2023, agaghị ajụ visa na UK.
Nnadi kwusiri ike na gọọmentị etiti mesiri ike na Naịjirịa jikọtara ọnụ bụ akụkụ niile nke atụmatụ iji merie Naịjirịa niile iji mepụta Fulani Caliphate.
Ọ gbara ụmụ amaala agbụrụ nke Southern Nigeria na Middle Belt ume ka ha kewapụ na Nigeria, na-adọ aka na ntị na ịghara ime nke a ga-eme ka ha bụrụ ohu na ikekwe mkpochapụ nke ndị mmadụ.
O dere sị, "Ọ bụzịghị arụkwaghịm na Fulani Caliphate, nke na-eme onwe ya ka ọ bụrụ 'Federal Government of Nigeria,' bụ na mwakpo mmeri megide mba ndị amaala Naịjirịa na-achọsi ike ịtọlite ​​ala maka ndị Fulani niile nke Afrịka. .
“Ọ bụkwaghị arụmụka na mbugharị mmeri ahụ e kwuru n’elu, bụ nke a na-arụ na ụdị njikọ aka ọnụ na njikọ ụjọ nke Islamist zuru ụwa ọnụ ISIS na Al-Qaeda (na-arụ ọrụ n’ime obodo dịka Boko Haram, ISWAP, na Fulani ndị na-azụ atụrụ),, yi uwe nke Jihad, yana Fulanised Nigeria na-eje ozi dị ka ebe ọrụ ọhụụ nke netwọkụ ụjọ ndị ahụ zuru ụwa ọnụ.
“Ekwesiri ikpebi ugbua na uzo abuo a diri ndi amaala nke obodo Naijiria ka aghapu ngwa ngwa gbasaa Lugardian Experiment na 1914 ma kpuchido nchekwa na nnwere onwe site na Union of Death nke a maara dika Nigeria, ma obu ijigide Naijiria maka mmeri ndi Fulani zuru ezu. na mbibi ha.
“Kwa ụbọchị, anyị (ndị na-abụghị Caliphate ndị ọzọ nke Naịjirịa) na-eyigharị itinye naanị ihe ga-ekwe omume maka mbuso agha ndị Fulani na-aga n’ihu, anyị na-eme ka ihe egwu anyị nọ na-abawanye ma na-eme ka ihe ịga nke ọma ndị Fulani na-eme.
“Nanị ihe ga-ekwe omume bụ ị kwụsị Njikọ Ọnwụ na ndị Fulani ngwa ngwa o kwere omume site na ịkagbu Iwu Ọchịchị Na-adịghị Mma nke Nigeria (1999), nke Fulani Caliphate‘ nwere na njikwa ’mba niile.
“Anyị (ndị na-abụghị Caliphate ndị ọzọ nke Naịjirịa) ga-ahapụrịrị anụ ọhịa a maara dịka‘ One-Nigeria ’iji weghachite nnwere onwe anyị na ikike ibi na ịba ọgaranya na udo n’ala nna nna anyị.
“Everyzọ ọ bụla ọzọ na-echekwa Naijiria maka mmeri ndị Fulani zuru oke ma na-eduga na mbibi anyị, ịgba ohu, na mkpochapụ nwere ike ime, ihe niile na-eme.
“Ihe mbido n’ọrụ a dị mkpa nke mgbapụta onwe anyị bụ ka anyị mata ma mee n’eziokwu na Federation of Nigeria (ya bụ naịjirịa anyị maara), nke bụ ọrụ anyị, dara ma nwụọ na 1967, na Caliphate jisiri ike na-ejide ozu, nke ọ transmogrified ya site n'enyemaka nke ndị Britain na nke ugbu a na-adịghị arụ ọrụ Unitary Contraption a maara dị ka Otu-Nigeria nke bụ nanị nke British.
“Ọ dabara nke ọma, ụmụ amaala nọ n’afọ ndị a na-amaghị ihe a na-eme na Naijiria ajụla ma jụ usoro iwu Caliphate tinyere n’afọ 1999 ka ọ bụrụ ntọala nke Union Union nke Naịjirịa nwere nsogbu.
“Naanị ihe fọdụrụ ugbu a bụ mkpochapu na mkpofu ngwa ngwa nke Iwu 1999 na-egbu egbu na usoro nkebi abụọ nke ikike mmebi iwu na-enweghị atụ, nke ga-agụnye ọnụnọ mpaghara ma ọ bụ hapụ nnọchi anya na nke mbụ.
“Iwu nke Iwu nke Iwu nke Majeure nke December 16, 2020, na-enye usoro zuru ezu na usoro maka itinye mgbapụ anyị site na naanị ụzọ dị mma iji chebe site na gburugburu Caliphate zuru oke ma dị egwu maka mkpochapụ.
“Nanị otu ụdị nke usoro ndu nke Iwu 1999 na-anwụ anwụ ka nwere ike ịnwe bụ nhoputa ndi ochichi n’afọ 2023, nke ga-agbanye aka na 1999 Constitution a jụrụ ajụ.
“O di nwute na ndi Caliphate nwere ugwo nke Onye-Naijiria, ihe ka otutu n’ime ndi Naijiria (South na Middle Belt, na-aru oru dika NINAS) ndi choro iwu nke 1999 juwo ntuli aka ndi ozo n’okpuru usoro iwu ahu (karia 2023 gburugburu nke nhoputa ndi ochichi), rue mgbe ekwuputara okwu nke Union site na Disemba 16, 2020, Constitutional Force M.
“A ga-etinye ụdị ahụ dị n’elu nke ndụ dị n’usoro iwu 1999 nwụrụ anwụ nke ụbụrụ ma ọ bụrụ na akụkụ ndị ọzọ nke Naịjirịa dị nzuzu iji kwenye na ntuli aka mba ọzọ na 2023. Nke ahụ agaghị eme.
“Dị ka e buru n’amụma,‘ Federal Government ’na-achịkwa olileanya Caliphate nke‘ Federal Government ’na-eme ihe niile nwere ike ime iji mee ka mba ahụ banye n’otu ntuli aka nke ọzọ na 2023, dịka akụkụ nke atụmatụ ya iji chekwaa iwu 1999 na-anwụ anwụ na ndị Fulani na-achịkwa Unitary Union ọ na-eweta .
“Caliphate ahụ, nke turu ọnụ ugboro ugboro na ya ga-ejide ike na Caliphate North ruo oge niile, tụbara ngafe nke Power Shift na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nke Southern Nigeria iji mee ka ndị Igbo na ndị Yoruba ghara imegide ibe ha. onye ga - enweta ike onye isi na 2023, si otú a na - ebibi obi nke NINAS Alliance.
“Nke a gimmickry ike gwụrụ nke nkewa-na-ọchịchị anwụọla na mbata, ebe ndị bi na South na Middle Belt ekwenyela na ha agaghị eme ka ịdị adị nke Iwu hekpụrụ apartheid 1999 (ma bụrụkwa ohu ha) site na usoro ntuli aka ọzọ na 2023.
"N'ihe banyere ọnọdụ a, NINAS na-ele anya na mkparị na enweghị nsọpụrụ na-adịbeghị anya site n'aka onye isi obodo Britain na Nigeria, Catriona Laing, bụ onye tụrụ egwu na onye ọ bụla tinyere aka na mgbasa ozi a ma ama iji belata usoro maka ntuli aka 2023 ga-agọnahụ visa UK.
"Mee ka a ghọta ya nke ọma na oge ụmụ amaala nke ala Nigeria, yana ndị otu Constituent Components nke Nigeria, na-eme iji wepụta onwe ha pụọ ​​n'ihe egwu doro anya na ugbu a nke iyi egwu dị adị nke ndị Britain mere Britain abụrụla maka ha , iyi egwu nke ịgọnarị visa nke United Kingdom na High Commissioner na Britain na Nigeria bụ ihe na-enweghị isi.
“Ọnọdụ ahụ ka njọ site n’eziokwu na akwụkwọ ndekọ British Colonial Records na nso nso a nke akọwapụtara na njikọta nke Nigeria nke 1914 gosipụtara n’ụzọ doro anya ọrụ Britain na inyefe ọchịchị na-adịgide adịgide nke ịchịkwa Nigeria n’aka ndị Fulani ma na-akwado ndị Fulani mgbe niile na mpako na akara ngosi nke ụgha ha. Ihe a na-akpọ nnwere onwe nke Nigeria na 1960.
“Edebewo ọnọdụ kacha mkpa Britain nwere na ọgba aghara Union na 1966, yana agha mgbukpọ ahụ a na-alụ megide Ọwụwa Anyanwụ Nigeria (Biafra) site na 1967 ruo 1970.”
“Karịsịa, nyere mkpa njem a gaa na mba ọzọ na nhoputa ndi ochichi na 2023 na Nigeria na-agbagha Union Dispute, ọ pụtara ịkwado ndị Fulani na-eme ihe ike ma na-emejọ mmejọ maka onye nnọchi anya Britain iji yie ndị amaala Nigeria egwu na-achọ ịpụpụ. onwe ha si Ọnwụ-ọnyà na Naịjirịa ghọrọ ha.
"NINAS nwere nchekwube na ndị Britain ga-akatọ Onye isi ala Britain na Nigeria, Catriona Laing, maka omume enweghị isi na mmechuihu ya wee rịọ ka echetara ya ozugbo."
Ndị Naịjirịa chọrọ ka ha dịrị n'otu, ndị na-ekewa ugwu enweghị ike imenye Buhari ụjọ: Garba Shehu April 20, 2021
Nigeria na agha; chọọ enyemaka, ma zere imebi ndụ mmadụ, Soyinka na-ekwu Buhari April 25, 2021
Ihe gọọmentị etiti ga-eme iji chekwaa Naịjirịa April 24, 2021
Onye ozi United States gara aga bụ Campbell na-ekwu na ndị ọnụ na-eru n'okwu na-achọ "nhọrọ dị iche iche" iji zọpụta Naịjirịa na ọdachi Nwere ike 7, 2021
"Anyị gosipụtara afọ ojuju anyị" Gọọmentị nke Canada, European Union, Ireland, United Kingdom, na United States niile katọrọ mmachi Twitter nke Naịjirịa na nkwupụta ha jikọrọ aka. June 6, 2021
Pantami na-enye gọọmentị anyị aha ọjọọ, chụọ ya n'ọrụ ugbu a: APC Chieftain April 19, 2021
Tags:nwee nsogbu, onye isi ala nke nigeria, onye na-akpọkọta, ndị na-azụ atụrụ, tony nna, otu iwu